Nyochaa Ngwaọrụ amụrụ iji daa | Akụkọ akụrụngwa
Nyochaa Ngwaọrụ amụrụ ida
Miguel Hernandez | | Ngwa
Teknụzụ dị oke egwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n’uche na ndị na-arụpụta ya ma na-arụ ya anaghị abụkarị ndị ọrụ nkịtị, mana nnukwu ndị ọkachamara na injinịa na teknụzụ. Ọ bụ ya mere hOy na Akụrụngwa Actualidad anyị ga-enye nyocha na-atọ ụtọ banyere ngwaọrụ a kara aka ịda n'oge afọ gara aga.
Nyochaa nke nnukwu ngwaọrụ na ndị ọzọ adịghị oke, ụlọ ọrụ niile arụpụtara nke kachasị njọ. site na Apple ruo Samsung, anyị nwere ntakịrị ihe niile. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ụdị akụrụngwa amụrụ ka ọ daa, echefula isiokwu anyị na-atọ ụtọ taa.
1 Ihe 3D, telivishọn anaghị ewepụ
2 iPad Pro 12,9 ″, ikekwe buru oke ibu
3 Juicero, ihe ọ juiceụ juiceụ euro 700
4 Galaxy Note 7 gbara ọkụ
5 Wearables na gam akporo Wear
6 Sony Mobile Xperia nso
7 Ihu ihu na ekwentị mkpanaaka
Ihe 3D, telivishọn anaghị ewepụ
Ruo ogologo oge, n'ihi mgbasa ozi anyị na-ahụbu, ọ dị ka telivishọn nwere ikike 3D ga-adị mkpa na ụlọ ọ bụla. Nke ukwuu nke mere na ụlọ ọrụ tinyere ego buru ibu iji mepee teknụzụ 3D na-arụ ọrụ na 3D XNUMXD maka ebe ntụrụndụ anyị. Otú ọ dị, ha hụrụ eziokwu dị njọ, nke ahụ bụkwa imirikiti ndị mmadụ enweghị mmasị n'iji ọdịnaya 3D, ma ọ bụ n'ihe nkiri ihe nkiri, ma ọ dịkarịa ala n'ụlọ ha, n'agbanyeghị njikọ aka dị n'etiti ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nkiri. Nkwubi okwu ndị a dị ka mgbakọ abụọ ahụ dịka Nintendo 3DS na 3D ntị.
N'ime oge dị mkpirikpi, ụkọ ọdịnaya na nleghara anya ndị na-ere ahịa emeela ka ọ ghara ikwe omume ịchọta TV na ikike 3D na shelf nke nnukwu ụlọ ahịa mkpọsa. Romepụta 3D na televishọn dị oke ọnụ ma nsonaazụ ahụ adịghị mma, gbakwunyere n'eziokwu na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ adịghị njikere ịzụta ngwaọrụ maka imegharị ụdị ọdịnaya a, ma ọ bụ na ọ masịghị ele ọdịnaya ọdịyo anya na njirimara ndị ahụ. Maka ihe a niile, 3D TV telivishọn abụrụla ọdịda kemgbe mbido ya, rue mgbe ọnwụ ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwenye.
iPad Pro 12,9 ″, ikekwe buru oke ibu
Na njedebe nke afọ 2015 ụlọ ọrụ Cupertino (Apple) juru anyị anya na mwepụta nke iPad kachasị ukwuu a hụgoro, nke mere na nke a mbadamba ọ gafere karịa panel nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye na MacBook ya na obere ọkwa nke MacBook Air. Site na nke a biara mbadamba nwere ikike mkpanaka, onye na-arụ ọrụ ekwentị, GPU na-emegharị maka sistemụ arụmọrụ ya (mobile). Na nkenke, anyị na-eche ihu iPad na-atụ ụjọ, na dịka ihe niile nwere apụl na-ebipụta, ọ tara ahụhụ obere nsogbu.
Obere nsogbu ahụ enweghị ike ịbụ naanị ọnụahịa ahụ. Ugbu a ụdị ntinye nke 12,9-inch iPad Pro maka 64GB nke nchekwa abụghị ihe na-erughị euro 902,91 ... na gịnị bụ nsogbu ahụ? Naanị, maka naanị narị abụọ euro karịa ugbua ị na-eche ihu MacBook Air na 8GB nke RAM, yana Intel i5 processor na 128GB nke nchekwa zuru ezu. Nke a bụ otu ngwaọrụ si bụrụ ihe eji eme egwuregwu mgbe niile dịka bọọdụ ludo (lee Instagram nke Neymar Jr.) mana ị gaghị ahụ otu n'ime ndị a ụmụ nwoke n'okporo ámá.
Juicero, ihe ọ juiceụ juiceụ euro 700
Afọ atọ gara aga, e gosipụtara ngwaọrụ nke bịara iji dozie nsogbu ahụike nke ọkara United States. Anyị nọ n'oge nke ndị ọzọ ike karịa mgbe ọ bụla, na Ọ dịghị onye dị ka CEO nke Juicero ịmara otu esi eji adịghị ike a. Mmalite a malitere ire "juicer" dị oke ọnụ yana yana teknụzụ nke dị n'ime ya nke yiri ka echefuola ihe kpatara ya, n'ezie ọ mere ihe niile ma e wezuga mmiri.
Nke ahụ bụ ka esi mụọ ya a ngwaọrụ na nke 700 euro pịrị apị ụfọdụ akpa ihe ọ juiceụ juiceụ na-ama afanyekwa, nke mechara si Bloomberg ha ga-achọpụta na aka ha nwere ike ịpịsi ike n'oge aka ha dị obere. Ọtụtụ narị ndị na-etinye ego na-ahapụ ihe karịrị 80 nde euro (site na Alphabet na Artis Ventures) na ngwaahịa nke ahịa dị ọcha, na nke kachasị njọ, na enwere ike imepụta ya maka obere ego. Fewbọchị ole na ole gara aga, Juicero kwupụtara ọkwa ya na-enweghị ego, n'agbanyeghị na anyị chere na onye isi ya, onye bụbu onye agha America maara ụwa oge ọkọchị. Ugbu a, akpa ha dị arọ karịa mgbe ọ bụla, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ihe ọ preciousụ preciousụ dị oke ọnụ ma na-abaghị uru na kichin.
Galaxy Note 7 gbara ọkụ
Ọdịda na-ada ụda karịa nke Samsung Galaxy Note 8, ole na ole n'ime anyị ga-ahụ. Onye na-achọ ịbụ ọkwa nke Samsung ruo oge ụfọdụ wee bụrụ otu n'ime ebe kachasị gbaa ọchịchịrị na ndekọ ụlọ ọrụ South Korea. Emepụtara ngwaọrụ ahụ na mbelata oge nke na-enyeghị anyị ohere imefu dị ka atụmanya iji chọpụta ntụkwasị obi nke ngwaọrụ ahụ, yana nkwado nke sistemụ batrị lithium nke ịdị mma. Nchikota ghọrọ ihe na-agbawa agbawaNke ukwuu nke na n'ime izu ole na ole Samsung na-ewepụ ngwaọrụ kpamkpam n'ahịa.
Nke a bụ otu n'agbanyeghị n'agbanyeghị ịnwa ịgọnahụ nke kachasị, Samsung kwalitere sistemụ nke iwepụ ngwaọrụ site na ahịa kachasị na ndekọ. Ọkụ ahụ na-ere ọkụ na-efu Samsung oge, ego na nnukwu nsọpụrụ. Otu nsọpụrụ ha chọrọ iweghachi izu ole na ole gara aga site na mwepụta nke 8 Galaxy Note, ngwaọrụ emere iji weghachite saga ederede na ebe ọ na-agatụghị ahapụ. Ọ bụghị oge mbụ Samsung na-agba ọsọ na-amalite ngwaahịa ndị a na-emezughị, mana ọ dịghị mgbe a na-agbanye ha ọkụ n'ụzọ ahụ wee kpuchie teknụzụ niile nke teknụzụ.
Wearables na gam akporo Wear
Mkpụrụedemede (Google) chere na ịbanye ụwa nke ndị na-eyiri uwe ga-adị mfe dịka nke teknụzụ ekwentị. N'ịbụ ndị kachasị dị nhịahụ na ngwaọrụ pụrụ iche karịa nke ekwentị mkpanaka, ihe niile ghọrọ ihe gbagwojuru anya. Nke ahụ bụ otú Gam akporo Wear nọ na-anwa iwepụ ọtụtụ afọ ka ọ na-anata otuto site n'aka ndị nrụpụta. Sistemụ arụmọrụ nke Google abụghị ezigbo ntụkwasị obi ma mara mma iji mee ka ndị ọrụ họrọ itinye ego narị narị euro na elele anya, nke a bụ etu data si mechie na-egosi na ndị na-ere ahịa kachasị mma bụ ndị na-agbanahụ usoro sistemụ ha.
Anyị zutere FitBit, Samsung na Apple Watch, nke nwere sistemụ arụmọrụ nke aka ha, nke edobere dị ka ụdị atọ kachasị mkpa ma a bịa n'ihe eji ejiji, site na ikikere nke Xiaomi na Mi Band. N'ụzọ dị otú a, Wear ejiri ya na ndị nkedo weghaara ya, ọkachasị elele anya dị ka Motorola na Huawei, ndị ahịa ha bụ naanị ịgba akaebe ma e jiri ya tụnyere asọmpi ahụ. N'ezie, Gam akporo Wear agbanweela ọtụtụ ahịa smartwatch ka ọ bụrụ ili.
Sony Mobile Xperia nso
Mgbe ị hụrụ ọhụụ Sony ọhụụ, gụnyere ndị egosiri na IFA, ị na-eche ma ọ bụrụ n’ezie n’ihu ekwentị emepụtara ma rụọ ya na 2012. N'elu ọnụ ọgụgụ nke FullVision, na-ebelata okpokolo agba na njedebe na njedebe, anyị na-ahụ na ụlọ ọrụ Japan na-enye atụmatụ ndị nwere obere ma ọ bụ ihe ọ bụla jikọrọ ha na ahịa dị ugbu a, anyị nwere ọtụtụ ihe atụ anyị nwere ike ịghọta n'etiti etiti ahụ, The nsogbu na-abịa mgbe ọkọlọtọ ụlọ ọrụ ahụ ka dị.
Ime ihe ike ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na akụkụ ndị na-adịghị adị na okpokolo agba site na oge ọzọ. Nke a bụ otú e si egosipụta ngwaọrụ ndị ọhụrụ dị na nso nso nke Xperia. Ka ọ dị ugbu a, ngwaike nke na-abịa na ngwaọrụ ahụ dị elu, gbagoo. Ihe na - eme ka anyị chee echiche banyere ya, ha nwere ike chụọ onye nrụpụta ahụ ogologo oge gara aga na enweghị ike ịnọchi ya, ma ọ bụ na ha anaghị ebi n'otu ụwa dị ka anyị. Ka ọ dị ugbu a, nkewa mkpanaka nke Sony na-aga n'ihu na ọdịda n'efu ma hụ Sony Xperia dị n’okporo ụzọ siri ike siri ike, Sony bụ ihe ihere, ezigbo ihe ihere.
Ihu ihu na ekwentị mkpanaaka
Samsung gosipụtara ya na Galaxy S8 dị ka ezigbo ihe ọhụụ, agbanyeghị, mmata ihu bụ akụkụ nke gam akporo nwere. Nke a bụ otú o si ghọọ isi usoro nke akpọchi ngwaọrụ dị ka LG Q6 na anyị nyochaa ebe a. Ya mere,… Kedu ihe na-ezighi ezi na ihu ihu gam akporo? Ọfụma ọtụtụ ihe, ihu ihu egosila na nwayọ nwayọ, adịghị arụ ọrụ, ma kachasị mma. Enwere ule dị iche iche nke ejiri ekwentị ma ọ bụ ihuenyo dị mfe meghee ekwentị.
N'ihi nke a, na agbanyeghị na Apple nwere ike ịhapụ anyị na ọnụ anyị na September 12 mgbe ọ na-eweta ihu ihu ya dabere na ihe mmetụta laser, anyị nwere ike ịkọ amụma na nnabata ihu iji kpọghee ekwentị bụ ọdịda. Na nke ikpeazụ anyị gwụchara ndepụta anyị nke ọdachi ndị na-adịbeghị anya na teknụzụ, jiri igbe igbe were hapụ anyị echiche banyere nke bụ ọdịda teknụzụ kachasị ama, n'ezie, anyị atụfuru ụfọdụ ma anyị na-aga itinye ya. Ugbu a, anyị ga-ajụ onwe anyị ... Kedu ihe ga - abụ ọdịda ọhụụ kachasị ewu ewu? Anyị ga-agwa ya na Ngwaọrụ Actualidad.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Nyochaa Ngwaọrụ amụrụ ida
Pixel 2 nke Google nwere ike inwe enweghi nhazi ohuru
Amazon Prime Video dị na PlayStation Spain